China Assembly yezvinhu zvakapedzwa zvigadzirwa uye semi-apedza zvigadzirwa vagadziri uye vanotengesa | P&Q
Iyo yekugadzira inoshanda mu ISO9001 yemhando manejimendi. Uye hofisi nefekitori yakachengetedzwa muE ERP system kubvira 2019.
P & Q fekitori yegungano yakatamira kuHaining kubva kuSongjiang, Shanghai. Angori maawa 1.5 kutyaira kuhofisi yeP & Q Shanghai. Pakutanga iyi fekitori yegungano yaida kupedzisa yakazara LED mwenje gungano uye kufa ichikanda semi zvikamu gungano. Workshop yedu aigona kutibatsira kudzora yose gungano mberi, uye kutungamirira nguva.
Yakadzama kero seinotevera:
Nha. 11 Kuvaka • Kwete. 8 Haining Avenue • HAINING, JIAXING • 314400 China
Sechikamu cheyekupedzisira-kune-kumagumo cheni yekupa masevhisi iyo yaanopa kune vagadziri, P&Q inogona kuita akasiyana siyana magungano, kubva nyore maviri-zvikamu zvemisangano kusvika kune akaoma magungano. Maitiro ekuvimbisa mhando aripo kuti ave nechokwadi cheyakaenzana mhando yegungano rega rega.
P & Q inopa nhema uye magungano tsika yakagadzirirwa kusangana neyakajairwa maratidziro uye kushivirira kwechikamu chimwe nechimwe uye mutengi wega wega. Vatengi vanovimba neP & Q kuona yakanyanya kugadzirwa yekugadzira uye gungano maitiro, uye vozogadzira izvo zvikamu uye nekugadzirisa iyo yese yekupa cheni maitiro, kusanganisira ekuverenga manejimendi. Mhedzisiro? Zvinogara zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro uye magungano.
Zvakanakira Kugadzira Magungano
● Zvikamu zvinounzwa zvakagadzirira kushandisa
● Kuwedzera kugadzira zvigadzirwa
● Yakaderera nguva yekutungamira
● Kuchengetedza nguva nemari
● Magungano akareruka kana akaomarara
Zvishandiso zvinoshandiswa yeAssemblies
Kuungana, kurongedza & kutumira
Sezvinoratidzwa nematanho atinobata; ISO 9001, P & Q ichaungana, kurongedza, kutumira uye kugadzirisa izere chinhu kana subassembly kune yepamusoro soro. Isu tinoona kuti chigadzirwa chako chinosvitswa kune yako yekugadzira tambo nenzira chaiyo nenzira uye nenguva yaunenge uchida izvozvo.
Pashure: Sheet simbi
Zvadaro: Kufa uchikanda aruminiyamu bulkhead mwenje
Yakakwira Pressure Inofa Kukanda
Chiedza Chigadziko Die Castings
Plastic jekiseni richigadzirisa Parts
Pressure Die Kukanda
Simbi Sheet Simbi